Zvakanakira nekuipira kweApple Watch neLTE | Ndinobva mac
Javier Porcar | | Apple Watch, Rumo, dzakawanda
Muzhizha rino tiri kugamuchira runyerekupe maererano nechitsva Apple Tarisa neLTEndiko kuti, tinogona kushandisa Apple wachi kunyangwe foni yedu isiri pedyo kana kudzimwa. Mubvunzo watinozvibvunza nhasi ndewekuti basa nyowani iri rinonyanya kubatsira here pakati pezvakanaka zvatinokumbira kubva kuApple Watch kana zvinongoshanda kuvhura mhando itsva yewatch yekufambira mberi mukusimudzira kwayo, uyezve, kuwedzera kutengesa. Saka isu tichaona zvakanakira nekuipira kweApple Watch, yakazvimirira pane yedu iPhone.
Tinoona zvimwe zvakawanda zvinobatsira izvo zvinokanganisa, chero bedzi iwe uchida kutora mukana nazvo. Chekutanga, wachi yako ichava 100% inoshanda, kunyangwe ukasabva pamba ne iPhone yako. Ichokwadi kuti muzviitiko zvakawanda, kutakura foni kunze kwemusha harisi dambudziko nhasi. Asi mune dzimwe nguva, zvakanakira kusapfeka chero chinhu. Kwatinozozviona zvakanyanya kunenge kuri kudzidzira. Kusvikira ikozvino, uye kubvira kusvika kwenyaya 2, haisi mhinganidzo, nekuti ine GPS, asi Apple Watch neLTE inotibvumidza kuteerera runyorwa rwe nziyo dzatinadzo paApple Music, Spotify kana imwe sevhisi yemimhanzi.
Ukuwo, zvichave zvinogoneka kugamuchira mameseji uye maemail, kunyangwe ukasatakura foni uchienda nayo. Kana zviri zvekufona, isu hatina dhata, asi zvinoita sekunge iwe haugone kugamuchira mafoni, kunyange zvichisara kuti zvionekwe kana zvichigona kuitwa kuburikidza neFacetime kana Skype.
Asi sezvatataura, isu tinodawo kuona iyo zvipingaidzo. Kubatanidza kune nharembozha kunoreva kuwedzera bhatiri kushandiswa. Sezvo Apple Watch isiri chigadzirwa icho nhasi chine kuzvitonga kuzere, isu tinofunga kuti Apple iri kushanda pane inoshanda sisitimu ine yakaderera kushandiswa. Iyo imwe sarudzo ingave yakatowanda wachi kupfuura iyo yazvino modhi.
Kune rimwe divi, zvinoreva uve newedzero yedhata, senge iyo inopihwa nevashandisi veazvino maPads. Mazuva ano mitengo idzi dzadonha zvakanyanya, kunyange kuiswa mune mamwe mapakeji efoni.
Chinokosha ndechekuti inomiririra shanduko huru kune vashandisi vazhinji, pamwe nekutarisirwa. Mukupesana, havasi vese vashandisi vanoda yakabatana wachi. Naizvozvo, isu tichaona zviri mberi mamodheru ane uye asina LTE.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Zvakanakira nekuipira kweApple Watch neLTE
iTunes U, iko kunyorera kwekudzidzira kunobuda muTunes.